ဓမ္မကထိကတစ်ပါး၏ အပြုအမူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဓမ္မကထိကတစ်ပါး၏ အပြုအမူ
Posted by countryboy on Aug 13, 2011 in Copy/Paste | 18 comments
ကျနော်တို့ မိတ်ဆွေတစ်ပါးက နိုင်ငံတော်တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာ နောက်ဆုံးနှစ်ပေါ့။ သူတို့ရဲ့ စာသင်ချိန်တွင် ဖြစ်ပျက်တာလေးတစ်ခုကို ပြောပြလို့ ကျနော်က ဧ၀ံ မေ သုတံ ဖြစ်လာတယ်လေ။ မိတ်ဆွေပြောတာကတော့ ဒီလိုပါ။ သူတို့က နံနက် ၇ နာရီမှာ အတန်းတက်ရတယ်ပေါ့၊ ဂနာရီမှာ အတန်းမရှိဘူးတဲ့၊ ဒါနဲ့ မြန်မာစာ(နာမည်ကြီး တရား ဟောဆရာတစ်ပါးကို ) ဆရာကို သွားပြီး နံနက်ပိုင်း ဂ နာရီဝင်ပေးပါလို့ လျှောက်တင်တယ်တဲ့ကွယ်။ အဲဒီ တရားဟောဆရာက ဘာပြောတယ်မှတ်တုံး မ၀င်ဘူး ကွာ လို့ ပြောလိုက်ရောတဲ့ အတန်းသားတွေနှင့် ညှိနှိုင်းမရဖြစ်ပြီး ၉ နာရီမှာ ၀င်ရောက်လာတော့ အတန်းသားတွေက အချိန်မဟုတ်လို့ မလာဘူးလေ။ ဒါကို ဆရာက ရုံးကိုသွား ပြီး လျှောက်ထားတာပေါ့။ ရုံးကလည်း ဘယ်နေမလဲ ပြေးလိုက်လာပြီး အတန်းသားအားလုံးကို ရုံးခေါ်ကာ လက်မှတ်ထိုးဖို့ အမိန့်ပေးလိုက်တာပေါ့။ အတန်းသားတွေက လည်း ဘယ်ရမလဲ တခါတည်း လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရာတာပေါ့။ ဒါဟာ ဆရာတစ်ဦးရဲ့ တပည့်များပေါ် ထားတဲ့ စေတနာတဲ့လေ။ အော် အော် ကျွတ် ကျွတ် လို့ စုပ်သပ်ကာ အတွေးနယ်ချဲ့နေမိလေရဲ့။ မိတ်ဆွေကတော့ စိတ်မဆိုးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တရားဟော ဘုန်းကြီးတစ်ပါးက အဲဒီလို ပြုမူလိုက်တော့ လှောင်ချိုင့်ထည်းက ကြက်သတ္တ၀ါလို ဖြစ်နေတယ်လို့ ထင်မြင်ချက်ပေးတယ်လေ။
အဲဒီဘုန်းကြီးက နာမည်ကြီး ရွှေဆံနွယ် ဆရာတော် ဆိုပါလား။
View all posts by countryboy →
( ကျနော်တို့ မိတ်ဆွေတစ်ပါးက နိုင်ငံတော်တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာ နောက်ဆုံးနှစ်ပေါ့။ )
ကျနော် ဆိုတာကရော ကိုယ်တော်ဘဲလား
ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေ ( ရဟန်း ) တစ်ပါးက
ဆိုတော့ကာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို ဘော်ဒါလိုသုံးနှုန်းတယ်ဆိုတော့
မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေတာ .. နဲနဲမှားတာနဲ့ မလွယ်ဘူးမှတ်။
(ဟုတ်ပ ….ကိုအောင်ပုရေ ) အသေအချာလဲရှင်းပြမထားဘူး….
ဒါတွေလျှောက်တင်ပြီးဘာလုပ်မှာလဲ။ ဒါတွေဟာ သာသနာတော်ကို စည်ရုံးအောင်လုပ်ရမယ်အစား သွေးကွဲစေတဲ့ သွေးခွဲဝါဒဖြန့်တဲ့ အကျိုးမရှိတဲ့ အကုသိုလ်တရားလို့မြင်ပါတယ်။ ဒီ လိုသွေးကွဲသွားရင် သင့်အတွက်ဘာအကျိုးအမြတ်ရရှိမှာလည်းဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။
ကိုယ်တော်ကလည်း သဂျီးမြောက်ပေးတိုင်း ဆရာကို မလေးမစား လုပ်တော့တာပဲ။ စာသင်နေတဲ့ ဆရာလေဗျာ။ တရားပြနေတာမှ မဟုတ်ဘဲ။ လူပျက်အောင်ဘုတို့ပြောလေ့ရှိသလို လူကိုမလေးစားချင်နေ ယူနီဖောင်းဆိုတဲ့ ဆရာဂုဏ်ကိုတော့ အားနာအုံးမှပေါ့။ ခေါ်တိုင်းလိုက်ရအောင် ဆိုက္ကားဆရာမှ မဟုတ်တာ။
စာထဲပါသလို ၇နာရီအတန်းရှိ၊ ၈နာရီမှာ အတန်းလွတ်နေလို့ အချိန်အလဟဿမဖြစ်အောင် ဆရာကိုသွားခေါ်၊ ဆရာကမလိုက်။ ၉နာရီကြမှပေါ်လာ (အဲဒီအချိန်ကလဲ သူဝင်ပေးရမဲ့အချိန် ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်၊ လူအုပ်နဲ့သွားပြောလို့ ၁နာရီနောက်ကျပြီးမှ လာတာလဲဖြစ်မယ်) ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆရာနဲ့တပည့်၊ ပေးသူနဲ့ယူသူ ပုံမှန်အစီအစဉ်မဟုတ်ရင် ကြားဖောက်ကိစ္စဖြစ်ရင် ဘယ်သူကဘယ်သူ့ မျက်နှာကြည့်ရမလဲ သိမှာပေါ့။ (အခုပြောနေတာ ပေးထားတဲ့ အချက်အလက်ပေါ် မူတည်ပြီးပြောတာနော်၊ စိတ်မဆိုးနဲ့)။ ရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူ အားအပြောင်းအလဲပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးအတက်အကျကို လက်ခံကောင်းတယ်ဆိုရင် ကျနော်ပြောတာ နားလည်မှာပါ…။
ကျွန်တော် မနေ့ ကတည်းက
ဒီပို့ စ် ကို ဖတ်ပြီး
ကိုယ်ပြောတာ က မှားသွားမှာလဲ ကြောက်တယ်
ဒီပို့ စ် တင်တဲ့သူ က ကိုယ်တော် များ လား ဟင်
ရွှေဆံနွယ် ဆရာတော် ဆိုပြီး
နာမည် ကြီး နဲ့ တစ်ကွ တင်လိုက်တာ က တော့
နဲနဲ များ လွန်နေမလားလို့ …..။
ကျွန်တော် သိထားသလောက် ကို ရေးပြချင်ပါတယ်
၂၀၁၀ ၊ ၈ လပိုင်း တုန်းက
ဖခင်ကြီး ဆုံးတာ ၁၄ နှစ်ပြည့် အဖြစ်
ရွှေဆံနွယ် ဆရာတော့် ဆီ မှာ
တံတားဆောက်ဖို့ ပဲ ဖြစ်ဖြစ်
ဆေးရုံဆောက်ဖို့ ပဲ ဖြစ်ဖြစ်
ဆရာတော် အလိုရှိသလို သုံးပါရန် ဆိုပြီး
ငွေ ၃ သိန်းကျပ် လှူခဲ့ဖူးပါတယ်
သာသနာတက္ကသိုလ် ဝင်းထဲ က ဆရာတော့် အဆောင်မှာပါ
ဆရာတော် ဟာ ကောင်းသောလုပ်ရပ် များကြောင့်
နာမည်ကျော် ဂုဏ်သတင်း အရမ်းမွှေးနေပါပြီ
ရွှေဆံနွယ် ဆရာတော် လို့ နာမည် ကျော်ရတာ က
အမျိုးသမီးတွေ ဆီ က နေ ဆံပင်သားတွေ အလှူခံ
ဆံပင်သားတွေ ကို ရောင်း ပြီး
နောက်ပြီး ဆေးရုံတစ်ရုံ ဆောက်လှူထားတာရှိပါတယ်
နေရာ ကို ပြန်ဖတ်ပြီး မှ ထပ်တင်ပေးပါဦးမယ်
တစ်ကယ် လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေ မှာ
လိုအပ်တဲ့ အလှူတော်မင်္ဂလာတွေ ကို
ရွှေဆံနွယ်ဆရာတော် က တစ်ကယ်လှူနေတာပါ
ဘယ်သူ့ မေးမေး သိနိုင်တဲ့ အမှန်တရား တွေ ပါ
ရွှေဆံနွယ် ဆရာတော် ဟာ
သာသနာ တက္ကသိုလ် မှာ ကထိက အဖြစ် ( ရာထူး မှားခဲ့သော် ခွင့်လွှတ်ကြပါ ခင်ဗျား )
ဒီတော့ အပေါ်က ပို့ စ် ကို ဖတ်ရပြီးတော့
ယခုတလော ဂေဇက်ဆိုဒ်ထဲမှာသတိထားမိတာက နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတော်တော်များများဆွေးနွေးဖြစ်တယ်ဆိုရင် ယခုလိုလမ်းကြောင်းပြောင်းစေတဲ့ပိုစ့်တွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်….မည်သို့ပင်ဆိုစေ..ကျွန်တော့်အမြင်မှာတော့ အကျင့်သီလနဲ့ပြည်စုံနေသော် ရဟန်းတစ်ပါးကိုပစ်မှားမိတယ်ဆိုရင်တော့ ကာယကံရှင်နဲ့ပဲ သက်ဆိုင်မှာပါ။တင်ပြလိုသော အကြောင်းအရာ အမှန်ကိုတော့ ကာယကံရှင်ပဲသိပါလိမ့်မယ်။
တပည့်တွေက… ဆရာနဲ့အချိန်အပြောင်းအလဲလုပ်သင်ပေးဖို့ သွားညှိတယ်..။
အတန်းသားအားလုံးရဲ့.. တ၀က်က စာသင်ခန်းထဲရှိနေသေးတယ်ဆို… ဆရာမှန်တာပေါ့…။
ဘုရားရှင်တောင်မှ.. သံဃာအများစုဆန္ဒလိုက်လျောပေးဖူးတဲ့.. သမိုင်းမှတ်တမ်းရှိတယ်..။
I had experience teaching classes,
It’s not that easy, even I am expert in my profession,
I have to prepare for each lecture in advance.
Some facts & data to be learned by rote.
Moreover, before lecture I have to make rehearsal,
what & how I will teach in this lecture &
what I will answer if student ask odd questions.
So, if somebody ask me ( in short notice ) to come 1 hour earlier to class,
It might be difficult & surprised for me.
I might not be ready by then.
ကျုပ်သာ..တပည့်ဆို..ဆရာကအခုလိုရှင်းပြရင်.. လုံဝကို လက်ခံမိမှာပါပဲ..။
အချိန်ပြောင်းခိုင်းလို့.. မပြောင်းပေးလည်း.. ဆ၇ာကို… သပိတ်မှောက်ဖြစ်မှာ မဟုတ်..။
But, situations are vary,
I amaMaster Mariner ( Captain ) &
If the students are barely pre-sea cadets, then, I don’t need to prepare much,
whatever I said, they will learn with real wide eyes ( awesome ).
But, if the students are Chief mate/Master contenders &
if I want my lecture to beaflawless & attractive lecture,
then, It really needed to prepare thoroughly.
သာသနာတက္ကသိုလ် မှာ ဘယ်လို စည်းကမ်းရှိလဲတော့ မသိပါဘူး သာမန်တက္ကသိုလ်တွေမှာတော့ အများအားဖြင့် ဆရာတယောက်က သူသင်ရမဲ့ အချိန်မှာ အတန်းထဲမျာ မရှိခဲ့ရင် (စည်းကမ်းထ်ိန်းသိမ်းရေးက လိုက်စစ်တာနဲ့တိုးရင်) ကျောင်းသားတွေ ရှေ့ချိန် မရှိလို့တိုးသင်ပါတယ်လို့ ဖြေရှင်းလို့မရပါဘူး ။ ထုခြေလွှာ ရေးရပါတယ် ။ လက်မှတ်ထိုးရပါတယ် ။ အတန်းကိုရှေ့တိုးမသင်နိုင်တိုင်း စေတနာမရှိဘူးလို့ပြောမရပါဘူး ။ အခုလဲ အခက်အခဲတခုရှိပါလိမ့်မယ် .
Very sensitive case! I agree that the teacher cannot change his class-time easily expect emergency situation.
(After reading the comments, our villagers may be round 40 year old.)
Sure, I amaformer Ship’s Captain & 40+.
ဒီကိစ္စက သာမန်တက္ကသိုလ်(ရဟန်းတက္ကသိုလ်မဟုတ်)တွေမှာ ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် အသေးစားလေးပါပဲ
သင်္ကန်းဝတ်မဟုတ်ဘဲ လူဝတ်နဲ့လည်း ကျောင်းတွေမှာ ဒီလိုကိစ္စကတော့ ရှိတတ်ပါကြောင်း